संसद विघटन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो - Baikalpikkhabar
विमलकुमार संग्रौला पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् । उनी लामो समयदेखि झापा जिल्लामा निरन्तर सक्रिय कानुन व्यवसायको क्षेत्रका एक अनुभवी र ज्ञाता पनि हुन् । उनै अधिवक्ता संग्रौलासंग देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा पूर्वसन्देशले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
–वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा दोश्रो पटक विघटन गरेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वर्तमान संविधानले देशमा पाँच वर्षसम्म बहुमतको सरकार कायम रहनुपर्छ भनेको छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने राजनीतिक दलले स्थायी सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मूल मर्म र भावना हो । त्यसो हुँदा राज्यको सबै संयन्त्रहरु पनि स्थिर हुन्छन् र देश र जनताको हितमा काम गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता पनि हो । यसबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाँक्षा पनि पूरा हुन्थ्यो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा एकपटक मात्र होइन, दोस्रो पटक पनि विघटना गर्नुभयो । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भने लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार पनि हो ।
–तर प्रधानमन्त्री त संविधान बमोजिमनै काम भएको हो भन्नुहुन्छ नि ?
यो उहाँको भनाई मात्र हो, तर संविधानमा भएको प्रावधानले त्यासो भन्दैन । जबसम्म संसदमा नयाँ सरकार गठन हुने अझ त्यसमा पनि बहुमतका सांसदहरुले विकल्प दिन सक्ने अवस्था रहन्छ, त्यसबेला सम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन । विगतको मनमोहन अधिकारीको पालाको सरकारले पनि अल्पमतमा हुँदा गरेको संसद विघटन बदर भयो । त्यति टाढा जानै परेन, यसअघि पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएकै हो । यसबाट के बुझिन्छ भने संविधानलाई आफ्नो हित अनुकूल चलाउने सत्ताधारीको गलत कार्य हो यो । यसबाट अहिलको संविधान कोमामा पुगेको छ । यो संविधाननै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने संभावना र खतरा पनि बढेर गएको छ ।
–अहिले कोरोनाको महामारीका समयमा निर्वाचनको घोषणा गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ ?
हो, निश्चय पनि अहिले कोरोनाबाट संक्रमण भएका नागरिकहरुको जीवन बचाउने लाग्नुपर्ने बेला हो । यो संक्रमण अझै फैलिने खतरा पनि विद्यमान छ । यस्तो महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेका बेलामा निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकारले असामयिक काम गरेको छ । यस्तो बेलामा निर्वाचन संभव छैन । फेरि पाँच वर्षको समय नपुग्दै निर्वाचन घोषणा गर्नु उपयुक्त पनि होइन । निर्वाचनका लागि अर्वौको खर्च लाग्छ । यसैले प्रतिनिधि सभाको आयु नपुग्दै निर्वाचन गर्नु उचित हुन सक्दैन । यसबाट राज्यलाई अनवश्यक आर्थिक भार पर्न जान्छ । अर्कातर्फ कोरोनाको महामारीको दोश्रो लहर आएका बेला र अझै त्यो दोहोरिन सक्ने भनेर विज्ञहरुले भनिरहेका बेला निर्वाचन गर्ने कुरा संभव छैन । यो हुन सक्दैन ।
-प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दायर भएको छ, के फेरि संसद पुनःस्थापना होला ?
हामी कानुन व्यवसायीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन । तर अहिलेसम्मको नजिर के छ भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत सांसद एकपक्षमा हुँदा हुँदै अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गर्न मिल्दैन । यो नजिर विगतमा पनि स्थापित भइसकेकाले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार संसद पुनःस्थापना हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । यसका लागि विपक्षी गठबन्धन सहितका दलहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर रिट पनि दर्ता गरिसकेको अवस्था हो ।
–देशको राजनीतिक अवस्थालाई चाहीँ तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो पुस्ताले राणाकाल कितावमा मात्रै पढ्यो, पंचायतकाल र १२ वर्षे संवैधानिक राजसंस्थासहितको संसदीय प्रजातन्त्रकाल व्यवहारमा भोग्न र देख्न पायाँै, तर अहिले परिवर्तन भएर आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि देशको राजनीति अवस्था धर्मसंकटमा परेको छ । देश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिएको छ । अब दलहरुलले एकअर्कालाई यसो नगर, उसो नगर भनेर आलोचना प्रतिआलोचना गर्नेमा भन्दा पनि देश बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । जनताका आधारभुत गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिक नेताहरुले पनि अहिले आफ्नो ‘ब्रेन वास’ गर्ने बेला हो । देश र जनतालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । यो देश विश्वभरि प्रकृति र संस्कृतिले चिनिएको छ, यसको रक्षा गर्नु अहिलेका सबै नेता र राजनीतिक दलहरुको दायित्व र कर्तव्य हो ।
–सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीहरुको फुट र विभाजनले के संकेत गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्रको फूट र विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यो कुनै अन्य पार्टी या दलका कारण फुटेको पनि होइन । उनीहरुको आफ्नै आन्तरिक कारणले फुट भएको हो । यसमा अरुलाई दोष दिन मिल्दैन । जनताले झण्डै दुई तिहाइको मत दिएको पार्टी नेताहरुबीचको आपसी खिचातानी कारण फुट्नु उचित होइन । यसमा देशी विदेशी अन्य पक्षलाई दोष दिन पनि मिल्दैन । यसबाट सर्वसाधारण जनतामा वितृष्णा आउने देखिन्छ । त्यसैले सकेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरु आलोचना आत्मआलोचना गर्दै एक भएर अघि बढ्दानै उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यो त यसअघि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आएको मत परिणामबाट पनि प्रष्ट भइहाल्छ नि ।
–अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्ला ?
अहिलेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन देश र जनताले चाहेको विषय होइन । निर्वाचन भनेको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा मात्र हु्नुपर्छ । लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउन अहिलेको गठबन्धनका राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्छ । सबै दलहरुबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । अहिले देश संक्रमणको अवस्थामा छ । यसलाई सही दिशामा लैजान सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट पनि न्याय मिल्ने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्छ । मानिसहरु अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि र सयममा उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउनु् परेको छ, साँच्चै भन्ने हो भने देश भयावह अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा देशलाई निर्वाचनमा धकेलेर महामारीलाई नै मलजल गर्नु शिवाय अरु केही हुन सक्तैन ।
शनिबार, १५ जेठ, २०७८, बिहानको ०६:४१ बजे
जनजातिका महिलाले पनि त महिनावारी बार्दैनन् । उनीहरू पापी भए त ?
डा. अरूणा उप्रेती कोरोना काल बाहेकका समयमा भारतको आसाममा हिन्दुहरूले असाध्यै मान्ने कामाख्यादेवीको मन्दिर असारमा ४ दिन बन्द हुन्छ । किनभने असार महिनामा देवीको महिनावारी हुन्छ भन्ने विश्वास छ । यो बेला कसैले पनि देवीको दर्शन पाउँदैन । देवीको अनुमानित
नमीन ढकाल पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीदेखि पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दुस नदीसम्म फैलिएको शिवालिक भू–परिधि नेपालमा चुरे क्षेत्रका नामले परिचित छ। करिव चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे पहाड श्रृखंला हो। सामान्यतया
डा. अरूणा उप्रेती कोरोना काल बाहेकका समयमा भारतको...
नमीन ढकाल पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीदेखि पश्चिममा पाकिस्तानको...
दमक ५ असार / अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन...
निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दै, आमसिक बजार खुले
असार ५/ कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण महामारीको ‘दोस्रो भेरियन्ट’...